Blue Wing Art Exhibition
Blue Wing Exhibition involving women artists took place at National Museum on Pyay Road, Yangon where I also participated.
For the total of 58 artists, each artist brought in2pieces of artworks. The wide diversity consisted of installation, sound art and time and space art. I will also post the pictures taken at the event here.
ရွှေခေတ် အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများကျင်းပသည့်ပွဲ BLUE WING Exhibition ကို ဖွင့်ပွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၀ မှ ၁၃.၁.၂၀၁၀ထိ အမျိုးသားပြတိုက်၊ ပြည်လမ်းတွင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ပန်းချီဆရာမများစုစုပေါင်း ၅၈ယောက်တွင် ၁ယောက်ကို ပန်းချီကား၂ကားနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ထားပြီး installation, sound art, နှင့် Time and Space များလည်းပါဝင်ထားပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲမှ အမှတ်တရပုံများကိုလည်း တင်ပေးသွားပါမယ်။
နာမည်ကျော် illustrator ဦးငွေကြည်က illustration ကို အမှတ်တရအနေနဲ့သူ့ပုံတူကိုရေးဆွဲပေးခဲ့တယ်။
Memorable picture taken with the famous illustrator “U Ngwe Kyi”
Happiness in Slience(Yellow Day) သည် 18 x 24 inches နှင့် Fragment from Heart (ရင်ထဲကအစ) သည် 18 x 25 inches တို့ဖြင့်၂ကားပါဝင်ထားပါတယ်။ Medium တွေကတော့ Digital Painting ဖြစ်ပြီး High Quality Satin paper ဖြင့် ထုတ်ထားကာ aritist ကိုယ်တိုင်၏ လက်မှတ်နှင့် print number များသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းများစုံစမ်းရန်နှင့်ဝယ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားခဲ့လျှင် email ပို့ကာ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ကျွန်မမြန်မာပြည်တွင် ၁လလောက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမှဝယ်ယူသူများ ပိုပြီးအဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။
“Happiness in Silence” & “Fragment of My Heart” were exhibited. They were both limited edition prints printed on satin paper. For anyone in Myanmar interested in buying those prints I will be in the country for another month so please email me for details.
ဝါး.....မြန်မာပြည်မှာရှိရင် လာကြည့်ချင်ပါတယ် သီရိရယ်။
ပျော်စရာကြီး ဓာတ်ပုံများများ ရိုက်ခဲ့နော်သီရိ။
မြတ်မွန် on 14 January 2010 at 16:54
I amashareholder ofagallery in Yangon. Is thereaway I can contact you? Or perhaps I can visit you at your house so that I can see most of your artworks.
Please contact me at martin.fford@gmail.com
Martin on 15 January 2010 at 12:17
Anonymous on 25 January 2010 at 13:52